Degdeg:somaliland oo warqad Diidmo ah u Dirtey wasaarada arimaha dibada etoobiya inaanu iman farmaajo Hargeisa – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Degdeg:somaliland oo warqad Diidmo ah u Dirtey wasaarada arimaha dibada...
Degdeg:somaliland oo warqad Diidmo ah u Dirtey wasaarada arimaha dibada etoobiya inaanu iman farmaajo Hargeisa
Xukuumadda Somaliland ayaa Warqad Rasmi ah u dirtay Dawladda Ethiopia, Taas oo ay ku muujisay in aanay Ogolayn in uu Madaxweyne Farmaajo yimaado Caasimadda Somaliland ee Hargeisa.
Warqaddaasi ayaa Nuxur ahaan loogu sheegay Ra’iisal Wasaaraha Ethiopia, Abiy ahmed, in aanay Somaliland diyaar u hayn in ay Hargeisa kusoo dhawayso Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. sida ay ii Xaqiijiyeen Ilo wareedyo Muhiim ah oo aad lagu kalsoon yahay.
Warqadaas xambaarsan mawqifka diidmada ah ee xukuumadda Somaliland, ayaa maanta la gaadhsiiyay Wasaaradda arrimaha Dibadda ee Dalka Ethiopia.
Ila wareedyada, ayaa sidoo kale ii sheegay in Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, usbuucan gudihiisa Baarlamaanka la hadli doono faahfaahina ka bixin doono kulamadii uu madaxda Kula Yeeshay Magaalada Addis Ababa iyo dhamaalkan uu ethiopia u diray ee uu kaga hortagayo imaatinka madaxwaynaha Soomaaliya.
Xukuumadda Somaliland oo Soo Dhaweysay Go’aanka Geesimadda leh ee ay Gaadheen...